Tratra ny mpampihorohoro Malagasy | GAZETY_ADALADALA
Tratra ny mpampihorohoro Malagasy
Posted on 24/06/2009 by gazetyavylavitra
Asa raha mbola hisy hilaza indray aorian’ity vaovao ampitaiko ity fa hoe mamafy lainga ny gazety_adaladala. Aza ny maha-adaladala ny gazety anefa no jerena fa ny ezaka ataony hampita ny vaovao ho anao.
Tratra omaly alina tamin’nya valo ny ampahany tamin’ireo mpampihorohoro sy mpametraka zava-mipoaka eran’Antananarivo. Miisa valo izy ireo ary saiky avy amin’ny vondron’orinasa TIKO sy MBS avokoa (agent de sécurité, mpiasa) afa-tsy ny mpamily taxi tafiditra amin’ity tantara ity. Toa isan’ireo voasambotra koa ilay iraika lahy teny amin’ny Leader Price.
Eo am-pikirakirana ny vaovao rehetra sy manao ny fandaminana farany aho dia havoaka ho anao eto ny andinindininy rehetra aorian’ny amin’ny enina na fito ora hariva eo. Fa izao aloha mbola lafo loatra ny vidin’ny connexion.
Ny azo ambara fotsiny aloha dia sehatra goavana ilay izy satria misy fifandraisana amina vazaha any ampita (efa azo hatramin’ny laharan-tarobiany FIXE sy Portable ORANGE ao Frantsa ao) sy manao fomba fiasa miaramila (tsy mifanonona anarana fa mampiasa pseudo, toy irany anaty film de geurre ireny). Tratra niaraka tamin’izy ireo ny zava-mipoaka saika hamonoana olona teo amin’ny La GASTRO PIZZA ANALAKELY indray alina iny. Rehefa nibaboka moa ry zalahy dia nilaza fa milamina loatra, hono, eto Antananarivo ka mila akorontana mba hahafahan’ny firenena any ivelany miditra an-tsehatra.
Ampitampitao ary ny vaovao fa aorian’ny amin’ny fito ora eo dia hararako ho anao eto ny andinindininy.
Izay maharitra vadin’andriana eeee!!!!
FANAZAVANA FANAMPINY LAVALAVA (amin’ny 7 ora mahery kely izao eto Dago)
4h, nahazo alalana tamin’ny procureur ny zandary
5h niroso tamin’ny fanaovana perquisition ka tamin’izany no nahatratrarana ireto zavatra manaraka ireto:
2 boteilles incendiaires
1 pistolet de fabrication artisanale
sy ireo zava-mipoaka
Nisesy avy eo ny fisamborana sy fisavana.
Voalaza ho isan’ny antony nanosika azy ireo hirotsaka amin’izao asa fampihorohoroana izao ny fahaverezan’ny fihinanany. Ankoatr’ilay hoe milamina loatra ny eto Antananarivo ka tsy ahafahan’ny miaramila vahiny miditra an-tsehatra.
Vazaha iray sy Malagasy any ampita no mpamatsy vola sy mpanome ny baiko amin’izany.
Efa misy moa ny fiaraha-miasa amin’ny INTERPOL momba azy ireo.
Raha ny elanelan-taonan’ireto vondron’olona (miisa 8) mpampihorohoro voasambotra ireto dia 17 taona no zandriny indrindra ary efapolo taona mahery ny zokiny indrindra ka:
1 livreur TIKO
3 mpiambina ny MBS
2 mpiasan’ny MBS
1 mpanamboatra radio (dépanneur matériels électroniques)
1 taximan mpitatitra ny ekipa
Mbola misy koa ny olona hosamborina ankoatra ireto tratra ireto.
Efa nanambàra moa Andriamatoa ORGANES fa hisy àry tsy maintsy hisy ny fisamborana.
Ary dia izao hitantsika izao tokoa ny nahasamborana ireto olona ireto.
Tsy azo nalaina sary moa ireto voasambotra ireto noho ny ‘présomption d’innocence’ mbola mitoetra satria tsy mbola tonga hatreny amin’ny fitsarana ny raharaha.
Toerana maro teto Antananarivo no nolazain’izy ireo sy nekeny fa tafiditra tao anatin’ny lasibatra efa nomanina mba hahatonga izay korontana sy faty olona izay aryho antony hiantsoana ireo tafika vahiny efa nodradradradraina hatramin’izay (SADC, CASQUES BLEUES…), ka isan’ireny lasibatra ireny ny LA GASTRO PIZZA. Nolazain’ny Zandary nanao ny fisamborana fa efa fantatra daholo hatramin’ny lohandohany rehetra, sy ny tena lehibeny, saingy noho ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana sy ho tohin’ny fisamborana, dia tsy hisy aloha ny fanomezana ny anaran’izy ireo ary tsy nolazaina koa ny toerana samihafa nanaovana fisavana sy nahatratràrana ireo zava-mipoaka, sao lasa mitsoaka ireo mbola tokony hotratrarina sy hosavaina.
Nandritry ny fanadihadiana ireo voasambotra no nilazan’izy ireo fa ny antony tsy nanapoahana ny LA GASTRO PIZZA Analakely, dia noho ny hamaroan’ny olona teo tamin’iny omaly alina iny.
Toerana isan’ireo falehan’ny maro mpivoaka alina tokoa ny eo sy ny manodidina azy.
Izany hoe mbola mba niserana tao anatin’ireto olona ireto ihany ny teo-tsaina Malagasy mitsinjo ny aina. Nanapa-kevitra ary izy ireo ny hikisaka hanao izany eny amin’ny manodidina an’i Behoririka. Nandritra izany rehetra izany anefa dia efa azo daholo ny mombamomba ny hetsika tian’ izy ireo hatao sy ny mombamomba azy, ary efa nisy ny mpitsongo dia nanaraka azy ka niafara tamin’ilay fisamborana. Tamin’ireny fisavana sy fisamborana ireny no nahatratrarana ny porofo (toy ny zava-mipoaka sy ny fanamboarana azy, ny vola be vao avy noraisina tamin’ireo vazaha sy Malagasy avy any ampita ka natakalo tao amin’ny MADA CHANGE, sy ny vola be 8.000.000 FMG mbola tsara pirina tany amin’ny tokantranon’ny iray tamin’izy valo tratra ireto.
Naseho tamin’ny mpanao gazety daholo ireo fitaovana tratra mba hanalàna ilay ahiahy hoe ny fitaovana tratra (na lazaina fa noforonin’ny mpitandro filaminana) tatsy ihany no nafindra sy nolazaina fa tratra taroa, mba handotoana ny hafa. Nanamarika anefa ny Zandary fa matihanina amin’ny asany izy ireo ary tsy manaiky hatao fitaovana pôlitika araka ny fieritreritry ny sasany azy.
Navoaka teo daholo araka izany ny zavatra rehetra hita sy tratra hatramin’izay (Leader Price Tanjombato, Ankorondrano , sns…)
Raha tsiahivina manokana ilay tetsy Ankorondrano, dia tena Andriamanitra tsy tia ratsy fa teo amin’ilay toerana ampitan’ny fiangonana Jesosy Mamonjy, fipetrahan’ny fiaraben’ny mpitandro filaminana, sady fametrahako Scooter rehefa manaraka ireny fiarabe ireny, no nisy nametraka ilay zava-mipoaka sarona teny amin’io toerana io.
Soa fa tsy nahavanona ilay izy, ary mba manana manam-pahaizana koa ny tafika Malagasy nanao ny desamorçage Izany hoe ny mpitandro filaminana mihitsy izany no tena nokendrena sy saiky hanaovana fanehoan-kery.
Etsy andanin’izany rehetra izany dia mbola kolokoloina etsy amin’ny MAGRO ihany ny filazana fa tsy maintsy averina Ravalomanana.
Raha mikorontana ny tany, raha voatondro molotra i MAdagasikara, an’iza ny andraikitra, ary iza no hamerina ny lazany?
Andraikitro, andraikitrao (na eto an-tanindrazana , na Diaspora) ny mamerina ny hasina maha-Malagasy
Fanampiny an-tsary kosa manomboka eto. Ratsy be aloha ilay izy fa tamin’ny télé no nezahana nalaina an!
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: GASTRO PIZZA, MBS, Mpampihorohoro, Tiko |
« Nanaitra ny maro io maraina io – famonoan-tena sa…? Barcamp andiany faharoa – IVOTEL »
jentilisa, on 24/06/2009 at 7:29 said:
NIsy fisamborana olona tahaka izao ihany koa tany Antsirabe. Olona valo no nosamborina ka navotsotra avokoa ny hafa fa nisy telo mpiasan’ny tiko notazonina mba hanasongadinana fa mpiasan’ny groupe tiko avokoa ireo « mpampihorohoro » ireo.
Paika politika izany hisamborana ny mpiasan’ny tiko rehetra.
gazetyavylavitra, on 25/06/2009 at 6:33 said:
Izaho moa dia miandry (raha toa ka mba ho azo ilay izy) ny kapila mangirana (CD) misy ny fiaikena (aveux) hoe nataon’ireo olona tratra teto Antananarivo ireo. Narantirantin’ny Zandary mantsy izy io nandritra ny fifampiresahana tamin’ny mpanao gazety, ary inoako fa samy nahita daholo koa ny mpijery fahitalavitra. Ny hoe tetika pôlitika indray, tsy dia idirako loatra, fa ny tenin’ilay officier de la gendarmerie (Colonel RAVALOMANANA Richard) ho valin-teny ho an’ny mpanao gazety nanontany azy nanao hoe ‘Je ne suis pas un pauvre vulgaire’ sy ilay hoe ‘mampalahelo ahy raha mi-douter ny parole d’un officier de la gendarmerie’ ianareo mpanao gazety , no tazoniko. Izany hoe tazonintsika amin’ny teniny izy fa hoe ‘tenin’olon-dehibe tompon’andraikitra tanteraka amin’izay nolazainy’. Satria niteny ilay officer fa rehefa nantsoina ny vavolombelona (ilay nifampitadiavana sy nantsointsoina tamin’ny fampielezam-peo sy fahitalavitra momba ny teny amin’ny Leader Price) dia nahatadidy tsara ny iray tamin’ireo mpametraka zava-mipoaka teny Tanjombato (tsy haiko na ilay ramatoa nitondra zazakely nitsoaka io voalaza fa vavolombelona io na hafa mihitsy), izay voalaza fa isan’ireo valo voasambotra. Miandry izay valin’ny fitsarana koa isika, fa raha ny Zandary milaza hoe baomba ireo, ny mpitsara mety hiteny hoe tsilalao afo , na tsipoapoaka ireo mba hankalazana ny fetin’ny fahaleovantena toy ny ankizy rehetra ihany. Andrasantsika koa izany izay tohin’ilay hoe fiaraha-miasa amin’ny INTERPOL sy ilay resaka laharan’antso roa efa azon’ireo manampahefana Malagasy. Sa mety mbola ho bluff koa ve izany rehetra izany? Asa lahy!!! Wait and see!
sipagasy, on 24/06/2009 at 9:32 said:
dia ny tena mamaky no menatra sy mihorohoro irery eto klehhh tena tsss beh ilay fomba fisaina sy fomba fanao tsssss
jentilisa, on 25/06/2009 at 6:48 said:
Asa ianareo raha nahatadidy ny film iray an’i Jim Carrey the mask (fa tsy the mask ilay film) , ilay hoe banky rompitra iny ny banky niasany sa orinasa tahaka iny inona moa. Very asa daholo ireo mpiasa ireo ka rehefa kelikely dia tratra namaky banky sy nandroba ny ankamaroan’izy ireo.
Iny avy hatrany no tsaroako raha vao niresaka an’ity ry zalahy satria tsy professionnelle fa manintona ny sain’ny hafa hoe izahay anie ka ny fiainanay mihitsy no potika! tsy pro tsinona ireo; raha tena mitombina ireo rehetra ireo dia mazava ho azy fa tsy hijanona hatreo ny olona mety hahavita « zavatra » eto amin’ity firenena ity.
Fa na izany na tsy izany, raha ireo baomba vita tanana ireo tsy haharava faritra hatramin’ny 200 metatra izany na oviana na oviana, izany hoe misy lainga ny nambarany… jereo ny zavamisy any amin’ireny mpametraka baomba ireny fa baomba iray kamiao vao mahapotika zavatra na trano 200 metatra izany. Dia lasa ny eritreritro hoe fa heveriny ho tsy misaina kosa ve ny olona ka ilazana izao abobo rehetra izao?
Verohanitra, on 26/06/2009 at 2:20 said:
Manahy mafy aho sao dia intox indray io hanomezana loza ny légalistes izay efa tiana horavàna. Rehefa tsy tiana ny alika dia lazaina hoe romotra.
Izay ilay hoe tokony nodakana ireto faty ary nolazaina hoe : « mitsangana ho aho fa aza laozana manao intox eo ! »
Verohanitra, on 26/06/2009 at 2:22 said:
Voilà ce qui va remplacer l’article en attente de modération.
Bravo la Gendarmerie pour son efficacité, son flair et son savoir faire !
Il faut utiliser ces talents pour attraper les voleurs, les pickpockets et les pilleurs !